बोइङ ७३७ म्याक्स बिमानलाई नेपालमा पनि प्रतिबन्ध ! - LaltinKhabar
बोइङ ७३७ म्याक्स बिमानलाई नेपालमा पनि प्रतिबन्ध !
काठमाडौं । बोइङ ७३७ म्याक्स बिमानलाई नेपालमा पनि प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ । भारतले बोइङ ७३७ म्याक्सलाई आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रोक लगाएसँगै बोइङलाई नेपाल आउने बाटो बन्द भएको छ ।
इथियोपियन एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा १५७ जनाको ज्यान गएपछि बोइङ ७३७ म्याक्समाथि विभिन्न देशले प्रतिबन्ध लगाईसकेका छन । भारतको नागर विमान मन्त्रालयले साँझ ४ बजेबाट भारतीय हवाई क्षेत्रमा कुनै पनि बोइङ ७३७ म्याक्स मोडललाई प्रवेश नदिने बताएको छ ।
भारतले बोइङ ७३७ म्याक्सलाई आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रवेश गरेर एक देशबाट अर्को देशमा जान रोक लगाएपछि नेपालमा पनि म्याक्स आउने बाटो बन्द भएको छ । नागरिक उड्डयन प्रधिकरणका अनुसार नेपालमा बोइङ ७३७ म्याक्सले उडान भर्ने गरेको छैन ।
त्रिभुवन विमानस्थलका अनुसार इथियोपियन एयरलाइन्सको दुर्घटना अघिसम्म सिल्क एयरको एउटा बोइङ ७३७ म्याक्स विमान नेपाल आउने गरेको थियो । तर, सिंगापुरले बोइङ ७३७ म्याक्समा रोक लगाएपछि यो बिमान समेत नेपाल आउन छाडेको छ ।
नेपाल आउन भारत वा चीनको एयर रुट प्रयोग गर्नैपर्छ । भारत र चीनले पनि यो विमानमाथि प्रतिवन्ध लगाइसकेको छ । यससँगै यी बिमान नेपाल आउने बाटो बन्द भएको हो ।
हाल नेपालका कुनै पनि नेपाली एयरलाइन्ससँग यो सिरिजका विमान छैनन् । तर, विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमान सेवा प्रदायकले यो सिरिजका विमानमार्फत नेपालमा उडान भर्न सक्छन् ।